News - Codsiga PVC
PVC waa tartiib-tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah lehna codsiyo kala duwan. Hada waa nooca labaad ee ugu balaaran badeecada balaastigga kaliya marka loo eego polyetylen-ka cufnaanta yar.
Alaabooyinka waxaa loo qaybin karaa alaab adag iyo alaab jilicsan:
Adeegsiga ugu weyn ee alaabada adag waa tuubooyin iyo qalabyo, iyo adeegsiga kale ee ugu waaweyn waa darbiyada gidaarka, qeeybinta, albaabada iyo daaqadaha, qalabka wax lagu rido, iwm.
Waxyaabaha jilicsan ayaa badanaa loo isticmaalaa filimada, go'yaasha, fiilooyinka iyo fiilooyinka, qalabka sagxadda, maqaar macmal ah, iwm.
Maxaa loo adeegsadaa PVC?
Kala duwanaanta codsiyada PVC ayaa caqabad ku ah mala-awaalka. Nolol maalmeedka, dhammaantood waa hareerahayaga: astaamaha dhismaha, qalabka caafimaadka, xuubka saqafka, kaararka deynta, alaabta carruurtu ku ciyaaraan, iyo tuubooyinka biyaha iyo gaaska. Waxyaabo kale oo aad u yar ayaa la mid ah ama awood u leh inay fuliyaan qeexitaannada noocaas ah. Sidan oo kale, PVC waxay kobcinaysaa hal-abuurnimo iyo hal-abuurnimo, iyadoo samaysa fursado cusub oo maalin walba la heli karo.
Maxaa loo isticmaalaa PVC?
Si fudud maxaa yeelay alaabada PVC waxay nolosha ka dhigtaa mid aamin ah, waxay keeneysaa raaxo iyo farxad, waxayna gacan ka geysaneysaa dhowrista kheyraadka dabiiciga iyo la dagaalanka isbedelka cimilada Iyo, saamiga kharashka-waxqabadka aad u wanaagsan, PVC waxay u oggolaaneysaa dadka heerarka dakhliga oo dhan inay helaan alaabteeda.
Sidee ayuu PVC uga qayb qaataa adduun nabdoon?
Waxaa jira sababo badan oo ay PVC iyo nabadgelyadu isugu xiran yihiin. Sababtoo ah sifooyinka farsamo ee aan la dhaafi karin, PVC waa sheyga ugu isticmaalka badan ee nafaha lagu badbaadinayo iyo aaladaha caafimaad ee la tuurin karo. Tusaale ahaan, tubbada caafimaadka ee PVC ma jibbo ama jajabiso, waana sahlan tahay in la nadiifiyo. Sababtoo ah iska caabinta dabka ee PVC, siligga iyo fiilooyinka lagu xardhay PVC waxay ka hortagaan shilalka korantada ee sababi kara dhimashada. Intaas waxaa sii dheer, PVC waa shey adag. Waxaa loo adeegsaday qaybaha gaariga, PVC waxay ka caawineysaa yareynta halista dhaawacyada shilalka.